Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay inay tixgelin doonaan fikradaha hoggaamiyeyaasha | KWIT
Magaalada Sioux City, waxay ahayd meel xasilloonayd magaalada xalay. Ma jirin cid loo qabtay iyadoo 200 oo qof ay isugu soo urureen bannaanka hore ee Saldhigga Booliska Magaalada Sioux ilaa aroortii hore. Shalay, Duqa Magaalada Sioux City Bob Scott ayaa sheegay inuu ka fiirsan doono inuu ku baaqo bandoow, laakiin weli go'aan lama gaarin weli.
Saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ayaa soo weriyey seddex dhimasho oo dheeri ah oo ay ugu wacantahay COVID-19 oo wadar ahaan 62 ka mid ah aagga metrooga ee Sioux City.
Waxaa jiray laba kiis oo cusub oo ka jira Dakota County oo ah ku dhowaad 1,700 iyo 25 kale oo dheeraad ah oo ka dhacay Woodbury County wadarta guud ee ku dhawaad ​​2,800.
Tyson Foods ayaa maanta daabacay war ku saabsan cudurka dillaacay ee ka dhacay digaaga doofaarka ee Storm Lake. 2,300 ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xarunta, ku dhawaad ​​600 ayaa tijaabiyey togan. Saraakiisha shirkadda ayaa sheegaya in in kabadan 75 boqolkiiba aysan muujin wax astaamo ah.
Ku dhawaad ​​saddex meelood meel shaqaalaha la tijaabiyey cudurka ayaa la caddeeyay inay shaqada ku laabanayaan.
Soosaarka xaddidan ayaa sii socon doona berri.
Dhanka kale, warshad hilibka lo'da ee Magaalada Dakota ayaa si tartiib tartiib ah kor ugu qaadeysa howlaha. Ku dhawaad ​​800 oo 4,300 ka mid ah shaqaalaha ah ayaa wali fasax ku jira kadib markii ay cudurka qaadsiisay.
Iskuulada Iowa waxay bilaabaan u adeegida cuntada xagaaga bilaashka ah carruurta iyo dhallinta, toddobaadkan, iyadoo la raacayo tilmaamaha jaha-wareerka bulshada iyo cunno-qabashada-goosadka ah ee ay bilaabeen inay u adeegaan bisha Maarso cudurka daacuunka.
Degmo Dugsiyeedka Bulshada Magaalada Sioux waxay u adeegtay in kabadan 250-kun oo cunno oo bilaash ah carruurta da'doodu tahay 1 ilaa 18.
Agaasimaha Adeegga Cunnada ayaa sheegay in celcelis ahaan, degmadu ay maalin kasta siin jirtay 4,000 illaa 5,000 cunto.
Degmadu waxay u adeegtaa ku dhawaad ​​15-boqol oo cunno maalintiiba xagaaga caadiga ah. Badanaa carruurtu waa inay cunaan cuntadooda goobta. Laakiin sababta oo ah COVID-19, waxay sii wadayaan inay cunaan cunnadooda ayna baxaan.
(Haddaad warkii aad goor dambe maqashid caawa waad ku dari kartaa sheekada soo socota. Haddii aadan ka boodin waxaanan kuu qaban doonnaa natiijooyinka doorashada berri).
Codbixinta ayaa weli furan caawa illaa 9-ka doorashada koowaad ee ka socota Iowa.
Cod-bixiyeyaasha Republican-ka ee 4-ta Degmo ee Koongareeska ayaa go’aansan doona haddii ay u dooran doonaan Steve King inuu noqdo murashaxa ay wajihi doonaan xisbiga Dimuqraadiga J.D. Scholten dayrta. Dimuqraadiyntu waxay dooranayaan murashax ay ku dooranayaan Senator Joni Ernst dayrta.
Saraakiisha doorashada ee Gobolka Woodbury waxay soo sheegeen codsiyo dheeraad ah oo loogu codeeyo codbixinta maqnaanshaha. Sababta oo ah walaac laga qabo COVID-19 waxaa jira shan goobood oo codbixin ah oo ka tirsan Gobolka Woodbury halkii laga isticmaali lahaa 44. Gelinka hore ee maanta waxaa jiray dad si joogto ah u daadanaya codbixinta codbixinta Xarunta Xusuus qorka Long Lines.
Dad badan ayaa sheegay inay halkaas u joogeen sababta oo ah tartanka loogu tala galay Woodbury County Sheriff oo dhigaya in labada murashax ee Jamhuuriga midba midka kale ka hor yimaado; shaqaale muddo dheer ah, Major Todd Wieck (wick) iyo sarkaalkii hore ee booliiska Sioux City Chad Sheehan.
Goobaha codbixinta ee South Dakota ayaa xirmay caawa 8 p.m.